﻿ यसकारण पिउनुहोस् बिहान खाली पेटमा पानी
धरान जाँदै गरेको जिप अरुणमा खस्यो, ६ जना बेपत्ता
नगर पछि नेकपा इटहरीका असन्तुष्ट समुहद्वारा प्रदेश कार्यालयमा पनि तालाबन्दी
‘मेरो विदेश भ्रमणमा महानगरको एक पैसा खर्च छैन’ : मेयर पराजुली (भिडियो अन्तर्वार्ता)
न्युरो अस्पतालमा टाउको जचाएका बिरामीलाई फार्मेसीले दियो सुगरको औषधि
पूर्वभर मौसम परिवर्तन, लुक्लामा रोकिए तीन सय पर्यटक
यसकारण पिउनुहोस् बिहान खाली पेटमा पानी
बुधबार ०४, असार २०७६
पानी बिना कोही पनि बाच्न सक्दैन । पानी पिउनाले धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी पिउनुको अर्थ धेरै छ । यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो ।
खाली पेटमा पानी पुउँदा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो । प्राय जापानीले बिहान उठ्नेबित्तिकै चार गिलास पानी पिउछन् । पानी पिएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन् । यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ । खाली पेटमा पानी पिउँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ । जान्नुहोस् यसका फाइदाः
खाली पेटमा प्रशस्त पानी पिउँदा पेटका विकार शौचमार्फत जान्छ र पेट सफा हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीलाई पनि सहयोग गर्छ । तपाईलाई बिहानै शौच आउदैन भने कम्तिमा दुई गिलास मन तातो पानी खाली पेटमा पिउँदा खुलेर शौच आउछ ।
तपाई बाथरुम जाँदा शरिरका उत्तेजित र विकारलाई बाहिर फालिदिनुहुन्छ । जतिधेरै पानी पिउनुहुन्छ त्यति धेरै विकार शरिरबाट फाल्न सहयोग पुग्छ ।
नियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर भोक लागेन भने के गर्ने ? खाली पेट पानी पिउदा तपाईको भोग जाग्छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा दुई गिलास पानी पिउनुहोस् तपाईलाई भोक लागिरहन्छ ।
मानिसलाई बारम्बार टाउको दुख्नुको मुख्य कारण प्रर्याप्त पानी नपिउनु हो । डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण नै टाउको दुख्नु हो । तसर्थ बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी पिउनुभयो भने यो समस्याबाट मुक्ती मिल्छ । टाउको दुख्नबाट बचाउनको अतिरिक्त यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट जोगाउछ ।
पानी पिउदा कोलोन सफा गरिदिन्छ । एक गिलास पानी खाली पेट पिउँदा कोलोनमा जम्मा भएको लेदो र विकार सफा गरिदिन्छ । कोलोन सफा भएमा शरिरलाई आवश्यक पोषक तत्व शोषण गर्न सहयोग पुग्छ । तपाईको कोलोन सफा भएमा समग्रमा सम्पूर्ण शरिर नै स्वस्थ हुन्छ ।
यदि तपाईले डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने खाली पेट पानी पिउनु उत्तम उपाय हो । पानी पिउदा कम्तिमा पनि २४ प्रतिशतले मेटाबोलिजमलाई बृद्धि गर्छ । यसको अर्थ तपाईले चाँडो र प्रभावकारी रुपमा खाना पचाउन सक्नुहुन्छ । जसका कारण छोटो समयमा नै तौल घट्छ ।
यदि तपाईलाई अल्छि लागेको छ भने एक गिलास पिउनुहोस् । खाली पेट पानी खाँदा रगतका रक्त कोषिकालाई चाँडो बढ्न सहयोग पुर्याउँछ । जति धेरै कोषिकाको बृद्धि हुन्छ त्यति नै धेरै शरिरमा अक्सिजन प्रबाह हुन्छ । यसको अर्थ तपाईमा एक प्रकारको उर्जा मिल्छ ।
खाली पेट प्रशस्त पानी पिउँदा अनुहारको चमक बढाउछ । शरिरमा जति बढी विकार र उत्तेजित तत्व हुन्छ त्यति नै तपाईको अनुहारको छाला नराम्रो बनाउछ । तर प्रशस्त पानी पिउँदा विकार हट्ने भएकोले अनुहारको सुन्दरतामा निखार आउछ ।
समग्र स्वास्थ्यको लागि पानी नभई नहुने तत्व हो । शरिरमा तरल पर्दाथको सन्तुलनका लागि पनि पानी नभई हुँदैन । दिनहुँ खाली पेटमा पानी पिउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्छ । तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएमा तपाईलाई कुनै पनि प्रकारका रोग लाग्दैन ।
यस्ता छन् जिराका फाइदा
खाली पेटमा नखानुहोस् यी खानेकुरा
सावधान ! आफूले प्रयोग गर्ने ईयरफोन कसैसँग सेयर नगर्नुहोस्
शिक्षा अधिकृतसहित चार जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
गृहमन्त्रीका भाइ धरौटीमा छुट्दै, सँगै समातिएका अन्य थुनामा
विमानमा पाद्ने समस्या रोक्न कानून ल्याउनुपर्ने सांसदको माग
नातीलाई जापान पठाउने लोभमा चित्रबहादुर केसीले गरे गम्भीर अपराध